Ghana: waxay ku dhasheen xinjaha xinjiraha 2 iyo 2 ilmo-galeenka, waxay ku kalsoon tahay xaaladdeeda - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA »Ghana: waxa uu ku dhashey XinfoX xinjirta iyo 2 ilmo-galeenka, waxay ku kalsoonayd xaaladdeeda
Waxay u egtahay sida sheeko jilicsan oo ay ku maqasho haweeney ay leedahay labo caro iyo labo ilmo, laakiin sheekadan Ghanaan maahan. Elizabeth Amoah ayaa muddo dheer ku noolaa cudurkaan, waxayna haatan go'aansatay in ay dunida ku wargaliso.
Sidoo kale loo yaqaan "Lady Gaarka ah," ayay u qarsaday oo ku saabsan xaaladdiisa wareysi uu idaacadda maxalliga ah 3FM Ghana, halkaas oo ay shaaca ka qaaday in iyana waxay ahayd in lagu sameeyo qaliin caafimaad bishii September ka dib markii la helo ogaanshaha dhibaatooyinka galmada.
"Waxaan ogaadey ilmo-galeenka labanlaaban iyo dhiig laba xinjir oo dheecaan ka yimaada 2015 ka dib MRI. Sidaas awgeed waa inaan ka gudbo qalliinka 7, "ayay ku tiri wareysiga.
CT, ayay tiri, ayaa sidoo kale la ogaaday endometriosis: cudur-galmo oo ku dhaca unugyada qoyaanka ee ilma-galeenka ka baxsan ilmo-galeenka.
Waxa kale oo ay ku muujineysaa in guska laba-gees-ka-geeska ahi ka dhigan yahay "inuu ku dhex jiro dibadda iyo kan kale ee gudaha ah." Wuxuu intaa ku daray in ilmo-galeenka double badanaa ma laha calaamado, laakiin halkii bandhigi dhibaatooyin caafimaad sida caadada joogto ahayn, fibroids, suuxid aan joogto ahayn oo mararka qaarkood sababa dhalmo la'aan.
"Waxaan haystay ilmo dhashay bilo ka dib afar sano oo aan caadi aheyn, oo aan marin xaalado caafimaad oo sidan ah ma fududa," ayay tiri.
Elizabeth ayaa sidoo kale sheegay in xaaladdan aysan ahayn mid caadi ah haweenka, isaga oo sheegay in "cilmi baaris ay muujineyso in laga heli karo haween ku sugan 350 iyo inuusan ogaan karin in ay xaaladdan tahay. ".
Ka dib markii ay marayaan mashaqadan, Elizabeth haatan uu ku soo laabtay Ghana si loo bilaabo olole la yiraahdo "The Mowduucyada imanaaya" (The maadooyinka la sheegin), mashruuc ay ku talo jirto in ay isticmaalaan la aasaasay Lady gaarka ah si loo baro haweenka, gaar ahaan gabdhaha yaryar, marka la eego ciladaha caafimaadka ee hidde-wade.
Sida xusuusin ah, in 2015, dhallinyaro Mareykan ah, 22 sano, kuwaas oo dhibaato ka soo xanuun soo noqnoqday dhabarka qaybta hoose ah, ay la yaabtay si ay u bartaan ka dib baadhaya iyada dumarka in ay leedahay laba vaginas, laba uteruses, laakiin kelyaha mid keliya.
Hambalyo !! Waxaan ahay Felicia Essan. Soo hel maqaaladayda ku saabsan warka Wargeysyada, wargeyska Afrika iyo meelo kale, wararka, kalsooni, talooyin qurxoon. Anigu waxaan jeclahay akhriska, wax walba oo ku saabsan dumarka. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay warbaahinta.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.afrikmag.com/ghana-nee-avec-2-vagins-et-2-uterus-elle-confidences-sur-son-etat/